အလှကုန်ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူများ၊ ထုပ်ပိုးအလှကုန်များ၊ အလှကုန်ပြွန်ထုတ်လုပ်သူများ - Reyoung
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်စတစ်ပြွန်များသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PE ပြွန်၊ Laminate ABL ပြွန်၊ nozzle tip tube၊ ဘဲဥပုံပြွန်၊ super oval ပြွန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းပြွန်မှ lip gloss tube၊ lipstick tube, PBL tube, sugarcane tube, PCR tube, extruded tube နှင့် polyfoil tube မှအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် EVOH မှအလွှာနှစ်လွှာနှင့်နှစ်လွှာအထိပလတ်စတစ်ပုလင်းများကိုထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသည်။ PET, HDPE၊ LDPE, MDPE, PP, PETG နှင့်ပုလင်းအမျိုးအစားများမှပျော့ပျောင်းသောထိတွေ့မှု၊ အဓိကအားဖြင့်လက်သန့်ရှင်းရေးအတွက် 5ml မှ 3L အထိရှိသည်။
ဦး ထုပ် & လျှောက်လွှာ
ကျွန်ုပ်တို့ကမတူကွဲပြားသော ဦး ထုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကိုပေးသည်။ flip cap, disc cap, sprayer, lotion pump နှင့် foaming pump; twist-off ဦး ထုပ်, acrylic ဦး ထုပ်, ထိုးဖောက် ဦး ထုပ်, ဆီလီကွန်ဖြီးအနှိပ်အဖုံးနှင့် nozzle အစွန်အဖျားထိပ်တန်း ဦး ထုပ်။
Reyoung ကော်ပိုရေးရှင်းသည်အလှကုန်ပစ္စည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အလှအပ၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင်ပလပ်စတစ်ပြွန်များနှင့် PET / HEPE ပုလင်းများကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Eco-friendly နှင့် biodegradable ဖြစ်သော PCR / Sugarcane / PLA ပစ္စည်းပေါ်တွင်နည်းပညာအသစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။
Freature ကြာရှည်ခံသည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုပက်ဖြန်းသည့် palstic ပုလင်း။ ပလတ်စတစ်ခလုတ်ပုလင်းသည် HDPE ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးချေးခြင်း၊ အက်စစ် / အယ်ကာလီခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေမှုန်ရေမွှားပုလင်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုပြည့်မီစေသည် Professional မှမှုန်ရေမွှားဒီဇိုင်း, switch ကိုအတူ nozzle, မှုန်ရေမွှားပြင်းထန်မှုကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, switch ကိုဒီဇိုင်းကိုမတော်တဆထိတွေ့တားဆီးနှင့်မလိုအပ်သောစွန့်ပစ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ပြန်လည်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်ပြန်လည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသန့်ဆေးခြင်း၊ စခန်းချခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားခြင်း၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း၊
Pump Dispenser နှင့်အတူအရောင်းအ ၀ ယ်ကြည်လင်သောပလတ်စတစ်ပုလင်း
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော PETG ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ theis pump dispenser ဘူးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်းလင်းသောစုပ်စက်ကိုဆပ်ပြာ၊ ပန်းဆပ်ပြာ၊ လက်သန့်ရှင်းရေး၊ အလှကုန်ဆေးရည်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ကုန်ပစ္စည်း Paramenters ထုတ်ကုန်များ Namelo PET ပုလင်းသွပ်စုပ်စက်နှင့်အတူထုပ် ၃၀ မီလီမီတာ၊ ၆၀ မီလီမီတာ၊ ၁၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၂၀ မီလီမီတာ၊ ၂၅၀ မီလီမီတာ၊ ၂၄၀ မီလီမီတာ၊ ၂၅၀ မီလီမီတာ၊ ၂၅၀ မီလီမီတာ၊ ...
အင်္ဂါရပ် - ခလုတ်ခုံပုံသဏ္shာန်ကိုလက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်း Paramenters ကုန်ပစ္စည်းအမည်စက်ရုံစျေးလက်ကားဖြည့်စက်ဆပ်ပြာပုလင်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှုန်ရေမွှားပုလင်းပစ္စည်းများ PE ပလပ်စတစ်ပမာဏ ၅၀၀ မီလီမီတာ / ၆၀၀ မီလီမီတာ / ၆၅၀ မီလီမီတာ (စိတ်ကြိုက်) ပုံစံစတုရန်းအရောင်စိတ်ကြိုက် ဦး ထုပ် Lotion Pump, Disc Top, Flip Top Cap, ဝက်အူအဖုံး၊ Fine Mist Sprayer အသုံးပြုမှုဆပ်ပြာ၊ နှင့်အခြားရေမျက်နှာပြင် Handling Hot St ...
အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း Hot Sell ညှစ်ညှပ်ထားသော Pe Pe Soft ...
Feature ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုမိုးရှင်းအသစ်တွင် PE soft tube ကို ပြုလုပ်၍ ခံစားမှုဖြင့်နူးညံ့သောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။ အရည်အသွေးကောင်း PE နှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ပြိုလဲခြင်း၊ လှပပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ အခါသမယအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း paramenter ပစ္စည်းအမည်သီးခြားပြုလုပ်ထားသော Pe Soft Touch Tube ပစ္စည်းအမှတ် RYT016 အချင်း 13mm မှ 60mm （ပတ် ၀ န်းကျင် tub 30mm-50mm (ဘဲဥပုံပြွန်) စွမ်းရည် 5ml-400ml (0.27oz-13oz) အရှည်ပြွန်စွမ်းရည် (5ml မှ 400ml) အတွင်းရှိညှိ။ ) Mono-layer အလွှာကို F ...
Feature သွားတိုက်ဆေးထုပ်ပိုးရန်အတွက်ပလတ်စတစ်အချည်းနှီးဖြင့်ပုံနှိပ်ထားသောခေါက်သိမ်းဆည်း။ ရနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလပ်စတစ်ပြွန်တွင်သွေးရည်ကြည်၊ လိမ်းဆေး၊ လိမ်းဆေး၊ အရေပြားထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်း paramenter ပစ္စည်းအမည်ခေါက်နိုင်သောအချည်းနှီးပုံနှိပ်ခြင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်း Item no RYT013 အချင်း ၁၃mm မှ ၆၀ မီလီမီတာ （ပတ်ပတ်လည်ပြွန်） ၃၀ မီလီမီတာမှ ၅၀ မီလီမီတာ (ဘဲဥပုံပြွန်) စွမ်းရည် ၅ မီလီမီတာမှ ၄၀၀ မီလီမီတာ (၀.၂၇oz-၁၃oz) အရှည်ပြွန်စွမ်းရည် (၅ မီလီမီတာ) ။ ။
Body Shower Gel အတွက် PET ပလတ်စတစ် pump ပုလင်းတစ်လုံး
Feature အရည်အသွေးမြင့်မားသော PET ဖြင့်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုထားသောပယင်းဆပ်ပြာရေချိုးဂျယ်လ်ပုလင်းဖြင့်ဝါကြွားသောမည်သည့်အရာမဆို။ ပယင်း PET lotion သည်ပက်ဖြန်းသောဆီနှင့်ရနံ့ကုထုံးကဲ့သို့အလင်းကိုထိခိုက်လွယ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်တွင်းခေါင်းလျှော်ရည်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆေးရည်၊ အေးစက်ဆေး၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောသန့်စင်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်း Paramenters ကုန်ပစ္စည်းအမည် Empty PET ပလတ်စတစ်ရေဘူးပုလင်းကုန်ပစ္စည်းအမှတ် RYG010 ပစ္စည်းပလတ်စတစ်ပမာဏ 30ml, 60ml, 100ml, 120ml, 175ml,2...
အသွင်အပြင်ပလပ်စတစ်ညှစ်ထားသောသွားတိုက်ဆေးပျော့စက်အတွက်ပုံနှိပ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ညှစ်ညှစ်ပြွန်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်ညှစ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော၊ ကြာရှည်ခံနိုင်ခြင်း၊ လက်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်း၊ flip disc cap ဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောပြွန်ကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ညှစ်ထုတ်နိုင်သောပြွန်သည်သွားတိုက်ဆေးနှင့်အခြားအလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း Paramenter အချင်း 13mm-60mm （ပတ်ပတ်လည်） 30mm-50mm (ဘဲဥပုံပြွန်) Capa ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်စတစ်မှုတ်တံများတွင် LDPE, HDPE, PVC နှင့် PP ပုလင်းအမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ပလတ်စတစ်ပုလင်းအမျိုးမျိုးသောဆလင်ဒါများ၊ ဘostonပတ် ၀ န်းကျင်၊ လေမှုတ်စက်များနှင့်များစွာသောအခြားထုံးစံအတိုင်းလက်ခံရရှိသည်။ FL oz ထံမှအရွယ်အစားအကွာအဝေး။ လည်ပင်းများစွာရှိသည့် ၁ ဂါလံ F-Style ကွန်တိန်နာများသို့မျက်လုံးတစ်စက်ဖြင့်ပုလင်းများ ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလတ်စတစ်ပြွန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ mono အလွှာ၊ အလွှာနှစ်ထပ်အထိ EVOH ပြွန်အထိအလွှာများ၊ အဝိုင်းမှဘဲဥပုံသို့ပုံသဏ္;ာန်များ၊ အချင်း ၁၂.၇mm မှ ၆၀ မီလီမီတာ၊ ၅ မီလီမီတာမှ ၅၀၀ မီလီမီတာအထိရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပြွန်ကိုယ်ထည်အလျားအရှည် (ပြွန်စွမ်းရည်အတိုင်းအတာအတွင်းချိန်ညှိထားသည်)၊ အလှဆင်ဖို့အထိ ...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပလတ်စတစ်ပုလင်းသည်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးကြည်လင်ပြတ်သားသည့်အလွှာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အထဲမှာဘယ်လောက်ပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်လုံခြုံစွာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းစွာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် pe အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပလပ်စတစ်ပုလင်းကိုယ်ထည်၏အဆင့်မြင့် PE ပစ္စည်းများကိုသေချာစေရန် ...
အလှကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးရာတွင်အသုံးပြုလေ့ပလတ်စတစ်ပိုက်များနှင့်ပုံသဏ္characteristicsာန်များသည်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ခြင်းတို့ကိုကြည့်သည်။ ယခုလက်ရှိအလှကုန်ထုပ်ပိုးရာတွင်အသုံးပြုသောပလပ်စတစ်ပိုက်များမှာအဓိကအားဖြင့်လူမီနီယမ် - ပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ရေပိုက်များ၊ အားလုံးသောပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်သတ္တုရေပိုက်နှင့်ပလတ်စတစ်ပူး တွဲ၍ ထုတ်လုပ်သည့်ရေပိုက်များပါဝင်သည်။
PE သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒြပ်အစေးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအများဆုံးသုံးစွဲမှုဖြစ်သော်လည်း PE ပလပ်စတစ်ပုလင်းထိပ်၏တင်းကျပ်မှုသည်ပလပ်စတစ်ပုလင်းထုပ်ပိုးခြင်းတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ PET ဆေးထိုးပလပ်စတစ်ပုလင်းများ ...